सरस्वती पूजा : तीन शुभ योग | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सरस्वती पूजा : तीन शुभ योग
सरस्वती पूजा : तीन शुभ योग
वसन्त पञ्चमी माता सरस्वतीको विशेष उपासना गर्ने महत्वपूर्ण पर्व हो । माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा पर्ने उक्त पर्व विशेष गरी विद्याकी देवीको रुपमा पुजिने सरस्वतीको साधना गर्नका लागि अति नै पवित्र दिन मानिन्छ । यो वर्ष माघ १६ गते बिहीबार गुरु बृहस्पतिकै बारमा पञ्चमी तिथि परेकाले यो वर्षको सरस्वती पूजालाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । यस्तो संयोग परेको समयमा विद्या आरम्भ गर्नका लागि अति नै शुभ हुने भएकाले साधनामा लाग्नेहरुका लागि भने विशेष दिन रहनेछ ।
शास्त्रमा यस पवित्र दिनमा भगवान विष्णु तथा कामदेवको पूजाको पनि वर्णन गरिएको छ । सर्व प्रथम भगवान श्रीकृष्णले ज्ञानादष्टादि श्री सरस्वतीको पूजा गरेर दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेकाले पनि पञ्चमी तिथिलाई पूर्ण तिथिका रुपमा पूर्ण ज्ञान प्राप्ति कामनाले पूजा तथा आराधना गर्ने चलन रहिआएको शास्त्रमा उल्लेख छ । विद्या आरम्भ गर्नका लागि यो वर्षको सरस्वती पूजाको दिन विशेष रहने हुनाले यसै दिनदेखि सुरु गर्दा कुनै प्रकारको साइत हेरिरहनु नपर्ने ज्योतिषीहरुले बताउने गरेका छन् ।
वर्षमा चारवटा नवरात्रहरु पर्छन् । त्यसमा माघ शुक्ल पक्षको समयलाई पनि गुप्त नवरात्र भनिएको छ । भगवती सरस्वती सत्वगुण सम्पन्न भएकीले मन, बुद्धि र ज्ञानकी अधिष्ठात्रीका रुपमा पूजा तथा साधना गर्नाले मानव जातिको सम्पूर्ण कामना पूर्ण हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता प्रकारका कामना शुभ समय र शुभ योगमा मात्रै हुने भएकाले यस्ता प्रकारका तिथि तथा पूर्ण योगको खगोलीय तरिकाबाट गणना गरिएको हो ।
पञ्चमी तिथिका देवता नाग हुन् र उक्त तिथि पूर्ण तिथि भएकाले यस दिनलाई हरेक शुभकर्म गर्न कुनै प्रकारका साइत कुर्नु नपर्ने र यस दिन गरिएको कर्मले दीर्घकालसम्म माताको कृपा रहिरहने धार्मिक विश्वास छ । नाक तथा कान छेड्नक लागि पनि आजको दिन शुभ हुने शास्त्रीय मान्यता छ ।
अध्ययनरत हरेक मानिसले उत्तिकै मेहनतका साथ पढिरहेका हुन्छन् । त्यसमा कसैलाई राम्रो सफलता मिल्छ भने कसैको पढाइ पूरा हुनै पाउँदैन । शास्त्रअनुसार कुन मानिसले कस्तो प्रकारको पढाइमा सफलता पाउने र कतिसम्म पढ्ने भनेर पहिले नै निर्धारण भइसकेको हुन्छ । त्यही कुरालाई जानेर पढाइमा लगाउनेहरुले विशेषगरी सफलता प्राप्त गरेको ज्योतिषीहरु बताउँछन् । शास्त्र लेख्ने तथा शस्त्रअस्त्र चलाउने काम फरक फरक व्यक्तिले गर्ने भएकाले पनि अहिले कस्ता योग भएकाहरुलाई कुन प्रकारको शिक्षा दिने भन्ने जानेरमात्रै अध्ययनमा लगाएमा सफल हुने बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।
हरेक व्यक्तिलाई माता सरस्वतीको कृपा फरक फरक तरिकाबाट हुने गरेको छ । कसैलाई घोक्ने तरिका राम्रो हुन्छ भने कसैलाई सीपमूलक काममा राम्रो हुन्छ । जसरी भए पनि माताको कृपा हरेक मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको हुन्छ नै । शास्त्रमा भनिएको छ, बुद्धि र ज्ञान दुबै फरक फरक कुरा हुन् तर बुद्धि तथा ज्ञान दुबैको तालमेल मिलेमात्रै सफलता प्राप्त हुनेछ । बुद्धि दिने ग्रहका रुपमा बुध ग्रहलाई हेरिन्छ भने ज्ञानको कारक ग्रहणका रुपमा वृहस्पति ग्रहलाई हेरिन्छ । माघ १६ गते ज्ञान दिने ग्रह बिहीबार वृहस्पति ग्रहको बार परेकाले पनि साधना गर्नेहरुका लागि विशेष दिन रहनेछ ।
कसरी गर्ने पूजा र साधना ?
यस दिन ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान तथा नित्यकर्म गरेपश्चात् पञ्चगव्य खाएर पूजा तथा अध्ययन कोठामा माता सरस्वतीको मूर्ति तथा प्रतिमा स्थापना गरेर वैदिक विधिपूर्वक दूध, दही, घ्यू, मह तथा सक्खर मूर्ति तथा प्रतिमामा चढाएर र फूलमाला लगाइदिने र धुपबत्तीले आरति गरेपछि सरस्वती स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्ने विधान छ । सक्नेले १०८ पटक सरस्वतीको मन्त्र जप गर्दा वाणी सिद्ध हुने पनि बताइन्छ । यसरी पूजा तथा आराधना गरेमा हरेक प्रकारका कर्म सिद्ध हुनेछ । उक्त दिन सरस्वती यन्त्र बनाएर साना बच्चाहरुलाई धारण गरिदिएमा बुद्धि तथा ज्ञान खुल्ने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ ।
वर्षमा चारवटा नवरात्र पर्छन् । पहिलो आषाढ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको समय, दोस्रो आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि मनाउने वडादसैंको नवरात्र र तेस्रो सरस्वती पूजाको पक्ष अर्थात् माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि स्वस्थानी साङ्गे पूर्णिमासम्मको समयलाई गुप्त नवरात्र भनिएको छ । वर्षको अन्तिममा पर्ने चैत शुक्ल पक्षको नवरात्र जुन समयमा चैते दसैं तथा रामनवमीसम्मका पर्वहरु पर्छन् । यसरी हेर्दा कुनै प्रकारले शक्तिकै आराधना हो भन्न सकिन्छ । सरस्वती पूजा पनि विद्याको आराधना तथा साधना र्ने पवित्र पर्व हो ।
(रिजाल ज्योतिषी तथा वास्तुविद् हुन् । उनी दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ राष्ट्रिय समिति नेपालका महासचिव समेत हुन् ।)
मकर संक्रान्ति किन विशेष ?
पछिल्लाे - दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप नीति निर्माण गर्न माग
अघिल्लाे - साउनामा वाफ लिँदा दम्पतीको मृत्यु